Amathuna ezincwadi ezikhohliwe: Ubuciko bukaZafón | Izincwadi Zamanje
UJuan Ortiz | | Amabhuku, Literatura, I-Novela
Amathuna ezincwadi ezikhohliwe Kuyi-tetralogy ebhalwe nguCarlos Ruiz Zafón waseBarcelona. Lolu chungechunge luyingcweti yombhali, olwaba yinto yokuhlela ezincwadini zeSpain zekhulu lama-XNUMX. Umbhali udale izindaba ezine ezihlelwe kahle futhi ezizimele, ngayinye inengqikithi yayo, kepha ekugcineni ixhumene.
Lezi zakhiwo zidlula ezimfihlakalweni ezahlukahlukene ezizungeze izizukulwane ezintathu zomndeni wakwaSempere kanye nesitolo sawo sezincwadi. Ngaphezu kwalokho, ukuthuthukiswa kwenoveli ngayinye kufaka incwadi eyindida ebeka ijubane lokulandisa. Konke kugcwaliswa ngabalingiswa abangenakulibaleka abacebisa i-labyrinth yezinganekwane nokusola okwenziwe ngumbhali.
1 I-Tetralogy Amathuna ezincwadi ezikhohliwe
1.1 Umthunzi Womoya (2001)
1.2 Umdlalo Wengelosi (2008)
1.3 Isiboshwa Sezulu (2011)
1.4 I-Labyrinth of Spirits (2016)
Ngo 2001, Ruiz UZafón uqale lolu chungechunge lwamanoveli asolisayo, omlingo wawo waqala ngokulethwa ngempumelelo kwe Isithunzi somoya. Incwadi yavele yanqoba izigidi zabafundi, yaqala into eyaziwa ngokuthi: "zafonmanía". Kulesi sitolimende sokuqala, umlingiswa ophambili noyise bavula iminyango endaweni engaqondakali futhi engakholeki: Amathuna ezincwadi ezikhohliwe.
Kwathi ngo-2008 umbhali wethula Umdlalo wengelosi, umsebenzi owaphula irekhodi lapho usuthengiswa khona eSpain, onamakhophi angaphezu kwesigidi. Eminyakeni emithathu kamuva, Isiboshwa Sezulu (2011) ujoyine iqoqo. e 2016 isahluko sokugcina sizofika ne- I-labyrinth yemimoya. Kule noveli yakamuva, zonke izingcezu zaleyo phazili umbhali azihlongozile ngenkathi enza isaga zihlangana.
Icala leTetralogy La ...
Kuyimfihlakalo ye-gothic kanye nenoveli eqanjiwe, lapho umbhali evula ngayo uchungechunge oluhlonishwayo. Indaba iqhubeka edolobheni laseBarcelona kusukela ngonyaka we-1945, kanti umlingisi wayo oyinhloko nguDaniel Sempere. Impilo yale nsizwa iyaguqulwa lapho, ngenxa kababa wakhe, eyazi Amathuna Ezincwadi Ezikhohliwe futhi anqume ukukhetha umbhalo Isithunzi somoyanguJulián Carax.
Kuthathwe yindaba - nokufuna ukufunda kabanzi ngeCarax -, UDaniel uqala uphenyo ajoyina umngani wakhe omusha uFermín. Ukuseshwa kubaholela ezindleleni ezingalindelekile, futhi njengoba beqhubekela phambili bahlangabezana nemininingwane ethokozisayo evela kumbhali. Phakathi kwalokhu, kuvela isiqephu esimnyama noPenelope Aldaya, esidale ukuthi le ndoda ibe ngumuntu omnyama futhi onesizungu.
Njengoba uqhubeka nemibuzo, izimpilo zabantu abasha ziqala ukuba sengozini. Kodwa, akukho okuvimba umuzwa kaDaniel owayenesibindi nomngane wakhe othembekile, owathi abaphumuli bengakacacisi yonke imfihlakalo ezungeze uJulián. Ngakho-ke kudlula itulo elizungezwe iqiniso kanye nefantasy, nenhlanganisela yokungena nokuphuma, ukubulala, ukuthandana okungavunyelwe kanye nobungane.
Kuyindida inoveli eyethusayo lokho kwenzeka eBarcelona yeminyaka yama-20. Indaba ethakazelisayo ine-protagonist yayo njengomlobi uDavid Martín. Kuleli thuba, URuiz Zafón wakhe icebo elehlukile kulelo lokuqala, kodwa ngendaba eminyene nehlelwe kahle lokho kugcina umfundi egxile kumlingo nokusola.
Itulo liyaqhubeka noDavid ekhumbula ubuntwana bakhe obudabukisayo, ngenkathi ekhumbula impumelelo yomsebenzi wakhe Idolobha Elilahliwe, ayishicilele ephephandabeni elidumile laseBarcelona. I-protagonist ilandisa ukuthi lapho ikuthola lokho kwaziwa, ithuthela esithabathabeni somuzi esishiyiwe futhi hlangana noCristina (ukuzimisela kwakhe). Kule ndawo entsha, wabhala eminye imibhalo — kubandakanya incwadi yakhe uqobo—, wanquma ukuqondisa impilo yakhe, futhi wenza isinqumo sokushada nale ntokazi enhle.
Nokho,, ngenxa yokudumazeka okuhlukahlukene, akukho okuhamba njengokuhlelile. Phakathi kokuphoxeka, eyodwa ye- Cristinaubani unomunye umuntu. Futhi, incwadi yakhe entsha i-fiasco, yUkwengeza ukuhlambalaza ukulimala, uyakufunda lokho unenkinga enkulu yempilo.
Ngesikhathi sokucindezeleka kwakho, UDavid uthintwa ngu-Andreas Corelli, uhlamvu oluyindida yini ekunikeza isamba esikhulu se imali nokwelashwa kwayo ngokushintshaniswa bhala incwadi ngemfundiso yenkolo entsha. Kusukela ngaleso sikhathi, i-maelstrom yezehlakalo ezethusayo ithinta impilo yombhali.
Phakathi kwamashwa amasha, uMartín uqala ukuphenya, njengoba ecabanga ukuthi bonke ububi buhlobene nokuthunyelwa kombhalo omnyama. Abantu abaningana bazongenelela ngale ndlela, njengomthengisi wezincwadi uSempere kanye nomsizi wakhe oqondayo, u-Isabella. Yonke imicimbi iholela uDavid encwadini ULux Aterna, ibhalwe ngumnikazi wesithabathaba esidala lapho ahlala khona, uMnu Marlasca.
Umdlalo Wengelosi / I ...
Ingumlando ogcwele ukungabaza nozungu, lapho abalingiswa abaningana abaphambili bendaba bebuyela phambili, njengo: Daniel Sempere, Fermín Romero de Torres, David Martín no-Isabella Gispert. Ngaphezu kwalokho, umbhali uveza okunye okungaziwa obekushiye abafundi bengaqiniseki phambilini.
Sekudlule iminyaka eminingana, UDaniel usungule i- umndeni nonkosikazi wakhe uBea noJulian omncane. Okwamanje, usebenza nobaba wakhe futhi umngani wakhe Fermin (umlingiswa oyinhloko isakhiwo) esitolo sezincwadi zomndeni: uSempere nezingane. Le ndawo ayiyona engcono kakhulu, ngakho-ke, uDaniel uyajabula lapho kuvela iklayenti elithanda kakhulu incwadi ebizayo: Ukubalwa kweMonte Cristo.
Kodwa-ke, injabulo isheshe iphele, njengoba le ndoda embi ithatha incwadi futhi ibeka inothi: "KuFermín Romero de Torres, owabuya kwabafileyo futhi onokhiye wesikhathi esizayo." Lapho isihambi sesihambile, uDaniel uhamba nomngani wakhe bayomtshela ngokwenzekile. Ngenxa, UFermín ubatshela ngomlando wakhe odlule futhi wembula imfihlo eshubile.
Ngaleso sikhathi, le ndaba ihamba eminyakeni edlule, lapho uFermín inkathi isiboshwa enqabeni yezempi yaseMontjüic y hlangana noDavid Martín. Kuleyo ndawo kukhona uMauricio Valls —umqondisi wejele nomlobi onenhlanhla—, osongela uMartín futhi asebenzise amakhono akhe. Ukusuka lapho kwazalwa ubungani phakathi kukaFermín noDavid, futhi owokugcina wamnika umsebenzi obalulekile ofaka uDaniel Sempere.
Isiboshwa Sezulu ...
Kungukulethwa okuvala umjikelezo wamanoveli ozungeze indawo yonke ye- Amathuna ezincwadi ezikhohliwe. Kulokhu, URuiz Zafón uthe: “… le eyokugcina iyintandokazi yami, mhlawumbe kungenxa yokuthi iyisicucu sentambo, engeza zonke izinto ezikhuliswe kwezedlule ”. Futhi, impela, iyincwadi ende kunazo zonke nephelele kunawo wonke kulesaga, enamakhasi angama-900 esewonke.
U-Alice Grey ungowesifazane oneminyaka engamashumi amabili owakhumbula ngokweqile esengumntwana, nokuthi kanjani wasinda ukuhlaselwa okwesabekayo kwe- Impi yombango yaseSpain. Kungo-1958, futhi le ntokazi enesibindi ifuna ukuthatha umhlalaphansi emsebenzini wayo, ngemuva kweminyaka eyishumi yokuba umphenyi wamaphoyisa omshoshaphansi eMadrid. Kepha ngaphambili kufanele yenza umsebenzi wokugcina: buza ngokunyamalala kukaMauricio Valls, ungqongqoshe kahulumeni kaFranco.
U-Alicia wenza ukusesha kanye noCaptain Vargas, uzakwabo. Lapho behlola ihhovisi labanyamalalayo, bathola incwadi ebhalwe nguVíctor Mataix. Ngokushesha, bayihlobanisa nesikhathi lapho uValls ayeqondisa khona iMontjüic — indawo lapho abanye ababhali, kuhlanganise nalowo mbhali, baboshwa khona. Ama-ejenti alandela umkhondo wale track futhi adlulele eBarcelona ukuyophenya abathengisi abaningana, phakathi kwabo kukhona uJuan Sempere.
Njengoba u-Alicia eqhubeka nophenyo, uthola inqwaba yamanga, ukuthumba nobugebengu by yombuso kaFranco. Ngemuva kokungena kuleyo nqwaba yenkohlakalo, baba sengozini enkulu, kepha bayakwazi ukuphunyula bengalimele. Konke ngenxa yokuthi u-Alicia wayesekelwa abantu ababalulekile, phakathi kwabo uDaniel noFermín abagqamile. UJulian Sempere osemncane naye ubambe iqhaza elibalulekile, empeleni, ugcina esengukhiye emphumeleni wale ndaba.
ILabyrinth ka ...
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » Amabhuku » Amathuna ezincwadi ezikhohliwe
UVladimir Mayakovski. Isikhumbuzo sokuzalwa kwakhe. Izinkondlo